Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Amalungelo kunye neziBonelelo zoMntwana osenkampini
INewtonshow: Inkampu yeNzululwazi eSingapore
Sonke siyazi ukuba abantwana bahlala benomdla kwaye bayakuvuyela ukuphonononga. Bakuthanda ukufunda kakhulu kangangokuba bade bafune ukucaphuka ukuze bafumane oko bakufunayo. Kodwa njengomzali, asinakusuka nje sinikezele kwizinto abazifunayo, ingakumbi xa zingabafanelanga. NgeNkampu yaBantwana eSingapore, baya kuba namava abawadingayo ukuze bafezekise uphuhliso lwabo.
Okokuqala, iinkampu zaBantwana kulapho abantwana bajoyina khona ukuze bafunde iintlobo ezahlukeneyo zezinto. Yindawo apho banokwenza khona abahlobo abalungileyo, ukwazi ukubaluleka kwendalo kunye nokunye. Ukuba wawukhe wazibandakanya nenkampu xa wawusengumntwana, usenokukhumbula indlela ekwakukwanelisa ngayo ukubasa umlilo uwedwa okokuqala. Kusenokwenzeka ukuba kukho amaxesha apho uye wafunda ukuqubha Inkampu yeSayensi eSingapore. Uyabona ke, yiphakheji yamava ayifunayo wonke umntwana.
Kutheni ufanele uthembele kwinkampu yezeNzululwazi eSingapore
Okokuqala, iNkampi yaBantwana eSingapore isenokungabi ntle njengezikolo zokufundisa i-quadratic equations kunye negrama. Asiyondawo yokufundisa amagama achazayo. Nangona kunjalo, yindawo yokuphuhlisa isimo sengqondo, isayensi kunye nophuhliso lomntwana wakho. Iinkampu zisenokungakwazi ukuqhuba izifundo ezinzulu, kodwa zifundisa izinto ezintle, iinqobo ezisemgangathweni kunye nefilosofi. Ngaloo ndlela, unokuziva ukhululekile ukusinikela kuphuhliso lomntwana wakho.
Kwelinye icala, ukuba uziva uthandabuza ngokujoyina umntwana wakho kwiNkampu yaBantwana ngenxa yokhuseleko, akukho nto kufuneka uzikhathaze ngayo. Nceda ukhumbule ukuba iinkampu zenzelwe abantwana - ngoko ke akukho ngozi kunye nemingcipheko onokuthi ukhathazeke ngayo. Kukho abasebenzi aboneleyo bokuphatha nokubonelela wonke umntwana. Ngaphezu koko, abakho nje naluphi na uhlobo lwabasebenzi, kodwa iingcali. Abasebenzi ezinkampini baqeqeshwe kakuhle ekukhokeleni lonke uhlobo lomntwana.
Ngawaphi Amalungelo kunye neeMbopheleleko zoMntwana osenkampini
Kuba unokuba nexhala malunga nokuphathwa kweenkampu kumntwana wakho, silungiselele uluhlu lwamalungelo kunye nezibophelelo zabantwana ezinkampini ukuze uqonde.
Indawo yeKampu ikhuselekile
Oku "kufuneka" kulo lonke uhlobo lwenkampu. Okokuqala nokuphambili, iinkampu azilungiswanga nje ngesiquphe. Icwangciswe kakuhle kwaye yenzelwe ukuba wonke umntu ayonwabele inkampu ngaphandle koloyiko lobungozi. Indawo yeenkampu ihlala ikwiindawo ezikhuselekileyo ezifikeleleka kubasebenzi kunye nabantwana kuphela. Ngelixa ngokubhekiselele kwingozi yempilo, kukwakho amanqanaba aphezulu ococeko kwiifitsha zeKids Camp eSingapore.
Abantwana bakhululekile ukuba bathethe kwaye bakhethe.
Ekubeni inkampu imalunga nokunika abantwana uphuhliso olufunekayo, kufanelekile ukubanika inkululeko yokuzikhethela yokuvakalisa nokukhetha. Ngokwenjenjalo, baya kucingisisa nzulu ngazo zonke izigqibo abazenzayo. Baza kuphuhlisa ingqiqo yokuhlalutya kunye nethuku kuyo yonke imisebenzi. Eli lungelo kunye nezibophelelo ziyasebenza kwinkampu nganye njengoko ingumgaqo jikelele.
Wonke umntu ufanele abahlonele abanye.
Umahluko awungomqobo ekufundeni. Kwiinkampu, kulindeleke ukuba kubekho iiyantlukwano ebantwaneni. Bambi basenokuba ngabezizwe, imibala neenkolelo ezahlukahlukeneyo, kodwa oko akusosizathu sokungahloneli. Ngapha koko, iinkampu ziya kunceda umntwana wakho aqonde lonke uhlobo lomahluko kwaye abahloniphe. Oku kuya kunceda abantwana baseNewtonshow baphuhlise izimilo zabo, kodwa kuya kunceda izizukulwana ezizayo malunga nokungalunganga kweengcamango.
Kufuneka kubekho intuthuzelo.
Nangona iinkampu zizaliswe yimisebenzi yomzimba, abantwana kufuneka bakwazi ukufumana intuthuzelo yabo. Into entle kukuba iinkampu zixhotyiswe kakuhle ukunika eyona ntuthuzelo ibalaseleyo kumntwana wakho ngeendlela ezahlukeneyo. Isenokuba ngokwasemzimbeni, ngokweemvakalelo, kwanasentlalweni. Ngokwasemzimbeni, kuba baya kuba neendawo zokuhlala ezipholileyo; Ngokweemvakalelo, baya kuphuhlisa imvakalelo yokuncamathela kwiinkampu; Ngokwentlalo, kuba baya kufumana abantu abakhululekileyo ababangqongileyo.
Kufuneka ibe yindawo enempilo.
Kwakhona, eli lilungelo elisisiseko kodwa lelinye lawona abalulekileyo. Okusingqongileyo kwiinkampu akufuneki kuzise naluphi na uhlobo lokungakhululeki kunye netyhefu kumava omntwana wakho. Yiyo loo nto kucwangciswe kakuhle kakhulu ukuphepha zonke iintlobo zobungozi. Kwaye xa isithi impilo, akukho mfuneko yabunewunewu. Ifanele ibe yindawo nje yokuthuthuzela. Esi sizathu esingakumbi sokuba kutheni ungaqiniseka ngokufumana umntwana wakho ngaphakathi kwenkampu.
Abantwana kufuneka baxhaswe.
Abantwana abanamava ebomini, kwaye baxhomekeke kakhulu kwizigqibo zabazali babo. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba abazali banokumenza umntwana wabo ahambe njengeqhekeza le-chess. Kuthetha nje ukuba abazali bafanele babe negunya lokukhokela nokuxhasa abantwana babo. Ngaloo ndlela, abantwana baya kukwazi ukufumana izinto abazithandayo ebomini. Mhlawumbi ngokwenene bathanda ukuba ngumbhali ngenye imini, okanye mhlawumbi imbaleki. Ke ngoko, abazali akufuneki babathintele abantwana babo kumaphupha abo amahle kodwa babaxhase endaweni yoko.
Wonke umntwana kufuneka abone ubuntwana bakhe ngokudlala nokutya ukutya akufunayo. Basenokudlala emvuleni, eludakeni, nengca ukuze bazive ngathi bangumntwana. Nangona kunjalo, kuza ixesha apho kufuneka baphuculwe. INewtonshow zilapha ukunika uphuhliso olufunwa ngabantwana ekuphononongeni, ekufumaneni amava, kunye nokunxibelelana.
Akukho nto yonwaba njengokubona abantwana bethu bekhula bezezona nguqulelo zibalaseleyo zabo njengabazali. Ke, ukubabeka kwiiNkampi kuyakwenza ukuba uziva ngathi bafuna ukugcwalisa uqwalaselo kunye namava enyama. Ekubeni ezinye iimbopheleleko namalungelo elungiselelwe bona, akukho nto sinokuzikhathaza ngayo. Ekufuneka sicinge ngayo ngamalungiselelo okubamkela kwakhona.